Egwuregwu 5 kacha mma maka ndị egwuregwu abụọ n'otu ekwentị gam akporo | Androidsis
Aaron Rivas | 24/10/2021 08:04 | Egwuregwu gam akporo, Mobiles
Egwuregwu maka ndị egwuregwu abụọ bụ ndị na-edozi nsogbu kachasị na ọnọdụ na-enweghị ụdị ịntanetị ọ bụla, site na Wi-Fi ma ọ bụ ngwugwu data mkpanaka. Ndị a, opekata mpe n'ọtụtụ oge, abụghị ọtụtụ mmadụ, tere aka na ya, mana ha nwere nhọrọ nke iji ihuenyo ekerịta egwu ka mmadụ abụọ nwee ike kpọọ ya site na ọkara nke ihuenyo mkpanaka, ugbu a anyị na -eweta otu nchịkọta nke egwuregwu kacha mma 5 nke ụdị a.
Ebe ị ga -ahụ ndepụta nke Egwuregwu ịkekọrịta ihuenyo 5 kacha mma maka ndị egwuregwu abụọ na gam akporo. Ha niile nweere onwe ha, n'otu oge ahụ, ha bụ otu n'ime ndị kacha ebudatara ma kpọọ ụdị egwu ha.
1 Holowkey 2
2 mkpụrụ Ninja
3 Egwuregwu Handyman na -ekpo ọkụ maka 2
4 4 n'usoro
5 2 Onye na-eme ihe ọkpụkpọ
Anyị na-amalite na Glow Hockey 2, otu n'ime egwuregwu hockey kacha egwu na gam akporo. Ọ bụ egwuregwu dị mfe nke enwere tebụl hockey na onye ọkpụkpọ nwere ike ịkekọrịta ihuenyo na onye ọkpụkpọ ọzọ, ka ha abụọ nwee ike jiri ọkara nke ihuenyo ahụ gwuo egwu. N'otu aka ahụ, enwere ike ịkpọ ya naanị ya.
Iji kpọọ naanị, enwere ụdị egwuregwu anọ dị, nke ọ bụla siri ike karịa ibe ya. Na mgbakwunye, enwere isiokwu na ụdị tebụl anọ dị iche iche ka egwuregwu ghara ịdị ike n'otu oge. Enwekwara mmetụta na ihe ịtụnanya dị egwu, na physics nke mmegharị egwuregwu a bụ ihe mere eme; dabere na ike ị jiri kụọ puck, hockey puck. Enwekwara ụgbọ mmiri anọ maka ịhọrọ na ịhazi egwuregwu ahụ, na ịma jijiji na -agbakwụnye ahụmịhe miri emi.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ gam akporo yana ọbụlagodi iOS (iPhone), n'ezie ị nụla ka mmadụ na -ekwu, opekata mpe, gbasara egwuregwu a, nke bụ Mkpụrụ Ninja. Ma ọ bụ na, n'agbanyeghị na ọganihu nke aha a agafeela, ọ ka bụ ihe a ma ama, ruo n'ókè na ọ bụ otu egwuregwu kacha egwu na ebudatara na akụkọ ihe mere eme nke sistemụ arụmọrụ abụọ, na Google Play Store na dị na Apple App Store.
Ugbu a, ụdị egwuregwu mkpụrụ osisi Ninja bụ naanị ya. N'ebe a, ị ga -egbutu mkpụrụ osisi niile na -amapụ site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ, na -ahapụghị ha. Ajụjụ bụ na nwekwara ike na -akpọ na -akọrọ ihuenyo, na -eme ka ndị egwuregwu abụọ nwee ike iji otu mkpanaka gam akporo jiri mkpụrụ osisi Ninja.
Mmetụta, eserese na eserese mgbe ị na -egbutu mkpụrụ osisi, yana ụda nwere mbepụ ọ bụla, na -eme ka ahụmịhe egwuregwu ahụ dị ịtụnanya. Chịkọta mma agha na mma dị iche iche wee mee combos dị ịtụnanya nke ga -agbakwunye gị ọtụtụ isi na njedebe egwuregwu ọ bụla. Kpoo enyi gị ma gosi ya onye kachasị mma ma a bịa n'ịcha mkpụrụ osisi.
N'ime Mkpụrụ Ninja enwere ọtụtụ minigames dị, yana mmezu na ihe ịma aka dị iche iche iji zute iji nweta ụgwọ ọrụ, ihe nrite na ihe ndị ọzọ. N'aka nke ya, ị nwere ike igwu egwu megide ndị egwuregwu ndị ọzọ wee nweta dojos na mma agha dị egwu. Gbalịa, melite ma karịa ihe ndekọ gị gara aga; Bụrụnụ ndị kacha arụ ọrụ, ọkachamara na ninja a na -apụghị imeri emeri.
Egwuregwu Handyman na -ekpo ọkụ maka 2
N'ịga n'ihu egwuregwu nke atọ nke nchịkọta mkpokọta a, anyị nwere Hot Handyman, utu aha dị mfe nke nwere ihe egwuregwu na -atọ ụtọ na nke egwuregwu abụọ ga -egwu n'otu oge n'otu ekwentị.
Ịkpọ Hot Handyman dị mfe: ọkpụkpọ ọ bụla ga -etinyerịrị na ọkara ihuenyo ya; otu bụ onye mwakpo nke ọzọ bụ onye na -agbachitere ya. Otu ga -egbochi onye nke ọzọ ịkụ ya ihe, ebe onye mmegide ga -eti ya obere aka, yabụ ntụgharị uche dị mkpa iji nwee mmeri na egwuregwu ọ bụla. N'ụzọ dị otu a, ị merie ma ọ bụ tufuo, na -enweghị karịa. Onye mbụ ga -erute aka ọkụ 10 bụ onye meriri egwuregwu a wee kpube ya dị ka onye kacha ọsọ na ngwa ngwa.
N'iji eserese eserese nke ọma, ọkwa kpakpando 4 na ihe karịrị nde 10 ebudatara na Google Play Store, Manitas Calientes bụ otu egwuregwu kacha mma maka ndị egwuregwu abụọ n'otu ekwentị.
Developer: Egwuregwu Peaksel
4 n'usoro bụ egwuregwu a ma ama nke nwere bọọdụ kwụ ọtọ na ndị egwuregwu abụọ ga -emerịrị ahịrị taịlị anọ na ibe ha nwere agba, ma ọ bụ kwụ n'ahịrị, n'ahịrị ma ọ bụ diagonally. Ogwe ahụ nwere ọtụtụ oghere na oghere, nke bụ ụzọ esi etinye ibe.
Unu abụọ ga-agba mbọ mebie atụmatụ iji wee tụgharịa ahịrị taịl anọ ha, n'otu oge wee merie egwuregwu taịlị anọ, dị mfe dị ka nke ahụ. Agbanyeghị, ọ bụghị mgbe niile ka onye mmeri; Ọ bụrụ na bọọdụ ahụ jupụta ma ọ nweghị onye na -eme ọkwa ha, a na -ewere ya dị ka eriri n'etiti ndị egwuregwu abụọ ahụ.
Developer: Ụlọ ọrụ Ultima Architect Inc.
2 Onye na-eme ihe ọkpụkpọ
Iji mechaa post mkpokọta a gbasara egwuregwu ihuenyo kacha mma 5 maka ndị egwuregwu abụọ na gam akporo, anyị nwere 2 Ndị na -egwu egwuregwu, egwuregwu nwere minigames 17 ọ zuru oke maka ndị egwuregwu abụọ chọrọ igwu n'otu ekwentị.
N'ebe a, ị ga -adị ngwa ma pịa bọtịnụ ma ọ bụrụ na i chere na ị nwere azịza ziri ezi n'ihu onye mmegide gị; ma ọ bụghị, ị gaghị achịkọta isi, mana ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ ma enweghị azịza ya, a ga -ewepụ otu isi. Echiche bụ iji nweta akara dị elu karịa onye mmegide gị.
2 Player chernobyl (Multiplayer)
Developer: osisi cherị dị jụụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Egwuregwu 5 kacha mma maka ndị egwuregwu abụọ n'otu ekwentị gam akporo
Ndụmọdụ na aghụghọ kacha mma nke obodo